iPhone 4 | Vaovao IPhone
El iPhone 4 Io no iPhone andiany fahefatra, araka ny tondroin'ny anarany. Navoaka tamin'ny 24 Jona 2010. Sambany hitantsika a fanovana endrika radika, endrika mahitsy kokoa ary fitaovana avo lenta toy ny vera sy vy. Navoaka tamin'ny volana vitsivitsy talohan'ny famoahana azy io satria nisy mpiasa Apple nanadino azy tao anaty bar. Tena nalaza izy olan'ny antena, izay very fandrakofana rehefa tratra tamin'ny fomba iray. Miaraka amin'ity maodely iPhone ity dia tonga tao amin'ny iOS ny multitasking marobe ary ny fisehoana avo lenta Retina. Izy io dia manana fakan-tsary 5 Megapixel aoriana ary fakan-tsary VGA eo aloha, RAM 512 MB ary fikirakirana 800 MHz. Hita amin'ny loko mainty sy fotsy manana 16 sy 32 GB, na dia tara aza ny maodely fotsy noho ny olana amin'ny fakan-tsary sy ny hazavana tafaporitsaka.
Ny iPhone 4 dia hambara fa lany andro amin'ny 31 Oktobra
Na dia mpampiasa afa-po amin'ny finday avoakan'i Apple aza aho izao dia miaiky aho fa tsy izany foana no izy. Na dia fantatro aza ...
Amin'ny andro toy ny androany: Steve Jobs dia manolotra ny iPhone 4
ny Miguel Hernandez hace 5 taona .
Izy io dia iray amin'ireo telefaona kanto sy mampiavaka indrindra amin'ny tantara. Nentiny tamin'ny famolavolana telefaona ny revolisiona, ...
Nesorin'ny Apple ny iPhone 4 avy tany India, 4 volana taorian'ny namerenany azy io indray
Tamin'ny volana Janoary dia nilaza taminao izahay fa hamerina hamerina ny iPhone 4 any India i Apple aorian'ny fanesorana azy amin'ny ...
Ny iOS 7.1 dia manatsara ny fahombiazan'ny iPhone 4 ary misy ny HFP audio protocol
Apple dia namoaka ny iOS 7.1 omaly, ny fanavaozana lehibe voalohany an'ny rafitra fikirakirana finday, satria nohavaozina tamin'ny taon-dasa….
Apple dia mikasa ny hamerina hamidy ny iPhone 4Gb iPhone 8 any India noho ny ...
Ny iPhone 4 no telefaona tianao indrindra any Etazonia amin'ireo mpividy mividy ny finday avo lenta voalohany. Ity dia…
Toa saika hadino ilay lohahevitra fa niverina indray izy io ankehitriny. Herintaona mahery izahay no tsy nanana vaovao ...
Miseho amin'ny eBay ny prototypa Rare iPhone 4
ny Nacho hace 9 taona .
Indraindray isika dia mahita vokatra Apple tsy fahita firy amin'ny eBay. Vao tsy ela akory izay dia ny lavanty ...
Ny olana amin'ny stock iPhone 4 dia miparitaka amin'ny maodely maro kokoa ary ny Genius Bars dia voatery ...
Apple dia hisolo ny iPhone 4 fotsy diso anao amin'ny iPhone 4S raha toa ka tsy manana tahiry intsony izy ireo
Matetika ny orinasa dia manome vokatra mitovy na avo kokoa raha sanatria ka tsy mahomby ny anao ary ...